Kọba akara, Ogwe mmiri, Roba ọsọ limiter
Nkọwapụta rọba na plastik
Extruded roba akàrà
Ihe profaịlụ profaịlụ
Ihe e ji mee roba
Ngwaahịa sitere na plastic
Akpa roba roba
Profaịlụ nchedo nke roba
Ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche
Faịlụ nchebe maka mgbidi na akuku
Azu mmiri maka ụgbọ mmiri
Ihe mkpuchi mkpuchi maka ọdịiche dị n'etiti ụgbọ okporo ígwè na ikpo okwu
Nsobe ịgba chaa chaa
Ngosipụta ihe arụ nke igwe anaghị agba nchara
Aluminom Brush Handle
Nkọwapụta ihe omimi aluminium maka nzọụkwụ
tọrọ ntọala n'afọ 1989, Hingsking bụ onye na-emepụta ngwaahịa ndị dị elu na ngwaahịa plasta. Anyị na-enyekwa ngwaahịa ngwaahịa niile n'ụwa. Anyị na-enye ndị na-agba ọsọ nke roba, ndị na-eburu ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri, ihe mkpuchi nke ụdị ụdị dị iche iche, ihe mkpuchi rọba, akara akara, ihe ntanetị, wdg.
Ngwa Ahịa Profaịlụ nchedo nke roba Extruded roba akàrà Ihe profaịlụ profaịlụ Ihe e ji mee roba Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Production Nkọwapụta rọba na plastik
Ihe nkedo nke a na-etinye na rubber EPDM
Anyị na-emepụta mgbakọ EPDM roba nke obosara ọ bụla, ọkpụkpụ, ike na ọkwa dịgasị iche iche. Ihe nkedo akpo nke rubber bu ihe di mkpa nke ikpuchi otutu oru ma weputa ya iji chebe ya site na mmiri....
A na-arụ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa ma ghara ịmepụta ọdịiche mgbe ọ bụla ejikọtara ya. Ngwaahịa ahụ nwere kemịcha magburu onwe ya. Ha na-eguzogide ọgwụ na corrosion, mmanụ, elu na ala okpomọkụ, eyi na nk...
BNK (butadiene-nitrile rubber) bụ ihe na-asọ oyi n'ahụ mmanụ, eyi na akwa. Ngwaahịa nke nitrile roba bụ oke ikuku. Enwere ike iji ha mee ogologo oge na okpomọkụ ruo 120 Celsius C, mana anaghị adab...
Anyị na-enye ọtụtụ ụdị profaịlụ profaịlụ, gụnyere eriri nke polyethylene gbasaa, profaịlụ profaịlụ PVC, profaịlụ TPE extruded, profaịlụ polyurethane thermoplastic, wdg....
Ụlọ ọrụ anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ nke ụgbọ mmiri nke ị họọrọ, ha dị na nha na ụdị dị iche iche. Ndị bumpers ndị a bụ ihe nchekwa dị mkpa n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla....
Nkọwa nchedo caba maka mgbidi na nkuku bụ ezigbo ngwọta maka izere mmebi nke mgbidi na nkuku. Ndị profaịlụ nchekwa nchekwa a bụ ndị kwesịrị ekwesị maka ntinye na ebe nkwụnye ụgbọala, ụgbọ mmiri, ọnyà,...
Ụlọ ọrụ anyị na-enye ọtụtụ ụdị nkịta ndị nwere ọdịdị pụrụ iche, ha na-agụnye mbadamba nkume, akụkụ anọ, na bumpers D, wdg. Profaịlụ ndị a kwesịrị ekwesị maka ma ma n'èzí ma n'ime. Ha na-etinye...
Iji chebe ọdịdị na arịa ndị sitere na nkwụghachi, anyị na-eme ka mmiri bumpers bụrụ ihe ngwọta dị mma. Anyị na-enye nhọrọ dịgasị iche iche nke ndị na-eme ka ịhọrọ. A na-ama ha site na ike ha, ogologo ...
Nsobe nke roba na-enye ụzọ dị mfe ma dị irè iji gbanwee okporo ụzọ, na-enweghị ụzụ ma na-emebi ụgbọ ala ahụ. Ike na-eme ka a na-eme ka ọ dị ike, na-enwekwa ike dị ogologo na ndụ ogologo oge....
E debere profaịlụ mgbochi nke alumini na nsọtụ nke ọ bụla iji hụ nchekwa nke ndị mmadụ n'oge ụmụ ha na ịrịgo arịgo. Ha nwere ogologo oge ndụ, oke nchekwa....
Ngwá ahịhịa anyị na-acha ọkụ na-eme ihe niile a chọrọ. Ha dịkwa mma maka iji nhicha, ekele maka ihe siri ike. Ọkụ ndị a dị mfe ịwụnye ma gbanyụọ. Anyị na-enye akụkụ ndị a n'ụdị dị iche iche na ụdị...
A na-emepụta ihe ngosi na-arụ ọrụ site na nchara nchara site na Hings iji mee ka ndị isi na ndị na-adịghị ahụ anya, na-ahapụ ha ka ha si n'otu ebe ruo ebe ọzọ. Ọzọkwa, ndị a na-egosi nwere ọrụ nkw...
Ụlọ ọrụ anyị na-enye ọtụtụ ngwaahịa ngwaahịa, izute ihe niile ndị ahịa anyị chọrọ. A na-eji ihe igwe na-emepụta ihe ndị e ji ígwè rụọ, bụ nke a na-egosi na ọ bụ ígwè nchara, brushes brush mere nke alu...
различные решения для уплотнений: полипропилен, тканная пропиленовая нить с или без силикона. Данный щеточный уплотнитель прост в сборке, высокая прочность уплотнения. Данные уплотнители служат для ...
(Quality Meela ya n'ezie n'ezie)
(Production Meela ya n'ezie n'ezie)
Echichi na Jizọs na-ezipụ
(E meela nkwa ọrụ)
Akụkụ nke ngwa
aha ụlọ ọrụ: Foshan shunde leliu hingsking plastic & metal products co., ltd.
Tel: 0086-757-25339480 (Sivvy Leung – глава отдела продаж) 0086-757-25339482 (Iris Guo – менеджер по продажам)
Nọmba faksị: 0086-757-25332993
Adreesị: Китай, провинция Гуандун, индекс 538324б г. Фошань, округ Шуньдэ, Лэлуй, промышленная зона Фуюй, ул. Лунчун 5 (5 Longchong Road, Fuyu Industrial Zone, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong 528324, China)